တွေးနိုင်သလောက်တွေးပါ ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 6:27 PM | No မှတ်ချက် | ကျောက်သင်ပုန်း
Brain Storming ဟူသော ဦးနှောက်အလုပ်ပေးခြင်းကို မြန်မာတို့ များစွာမရင်းနှီးကြ၊ ဆန်အိတ်တစ်အိတ် ကိုသာ ထမ်းလိုက်ချင်သော်လည်း၊ ဦးနှောက်အလုပ်ပေးမှုတစ်ခုကို မလုပ်ချင်ကြချေ။ တွေးရခေါ်ရ၊ တွေးတတ်ခေါ်တတ် သောဝန်းကျင်နှင့် များစွာစိမ်းနေခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
တိုးတက်ပါသည်ဟူသော စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ သုတေသနအဖွဲ့က အမေရိကန်တို့ အဘယ့်ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးကိုနှစ်ပေါင်း (၇ဝ) မျှ ဦးဆောင်နေနိုင်ပါသနည်း ဟူသောအမေးကို ဖြေနိုင်ရန် သွားရောက် လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ထင်ရှားစွာတွေ့ရသောအချက်တစ်ခုမှာ အမေရိကန်တို့၏ “တီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်စွမ်း” ကြောင့်ဖြစ်သည်။ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဟူသည် တွေးခေါ်ရာမှ အခြေခံခဲ့ကြရသည်ချည်း ဖြစ်၏။ မိုးပေါ်က အလိုအလျောက် ကျလာသည့်အရာမဟုတ်ချေ။
နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြံပေးများ၏ CSIS (Center for Strategic and International Studies) မဟာဗျူဟာ နှင့် နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သော နိုင်ငံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းတွင် ဘာသာရပ် (၁၅) ခုအပြင် အတွေး အခေါ်ကို အခြေခံသည့် သဘောတရားရေးများကို မျှဝေပို့ချနေပါသည်။ ရဲရဲတွေး၊ ရဲရဲပြောစေပါသည်။ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ သားတို့ အဓိကရင်ဆိုင်နေရသော
စိန်ခေါ်မှုမှာ သဘောတရားရေးပြဿနာ (Conceptual problem) ဖြစ်သည်။ ရှုမြင်မှု၊ခံယူမှု မှားယွင်းရာမှ အယူအဆတို့ မှားယွင်းရခြင်း ဖြစ်သည်။ အယူအဆ၊ သဘောတရားများ မှားယွင်းလျှင် ဆောင်ရွက်ပုံဆောင်ရွက်နည်းတို့ လွဲချော်ရပါသည်။ သဘောတရားရေးရာ မှားယွင်းမှုမှာလည်း တွေးခေါ်မှု အားနည်းသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အတိုဆုံးသောတွန်းအားအဖြစ်…
“ဖြစ်နိုင်သမျှကိုတွေးစမ်းပါ” "Think all possible things" ဟု စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်တွင် ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။
အမေရိကန်တို့၏ တွေးခေါ်မှုမှ သန္ဓေတည်မွေးဖွားသော တီထွင်ဆန်းသစ်မှုကို အခြားတိုးတက်သောနိုင်ငံများ က လိုက်မမီချေ။ စင်္ကာပူပင်လျှင် လက်ဖျားခါသွား၏။
အတွေးများအားကောင်းလာလျှင် အဆင့်ဆင့် တိုးတက်လာပြီး တီထွင်မှုပါတွေးခေါ်မှု (Creative thinking) ကိုရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအပြင်၊ နည်းပညာ မဟာ ပေါက်ကွဲမှုဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်နေရသောခေတ်ကြီးတွင် တီထွင်မှုပါတွေးခေါ်မှုမရှိခဲ့လျှင် သူများရှေ့ရောက်ရန် မဖြစ်နိုင်ချေ။ တွေးတောခြင်းမှ အခြေခံသော တီထွင်မှုပါတွေးခေါ်မှုသည် ယနေ့ခေတ်သစ်တွင် မရှိမဖြစ်အရာဖြစ်လာပြီး၊ competency ဟူသော ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း၏ အခြေခံအရည်အချင်းလည်း ဖြစ်လာသည်။
အစဉ်အလာတွေးခေါ်မှုသည် ခေတ်သစ်တွင် နေရာမရှိတော့ချေ။ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုပါ တွေးခေါ်မှုက အစားထိုးနေရာယူပြီးသွားပြီ ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးတည်း၏ တွေးနိုင်သမျှ အတွေးသည် တစ်စုံတစ်ရာအထိ ခရီးရောက် ပါသော်လည်း၊ အခြားသူများနှင့် ဖလှယ်တွေးသည် ပို၍ခရီးရောက်၏။ သူ့အတွေးကြောင့် ကိုယ်ကအတွေးသစ်တစ်ခု ရလာသလို၊ ကိုယ့်အတွေးကို ထုတ်ဖော်ရာမှသူလည်း အတွေးသစ်ရလေ့ရှိ၏။ အတွေးနှစ်ခု
ပူးပေါင်းရာမှ ပို၍ ကောင်းမွန်သော အတွေးသစ်တို့ကိုလည်း ထုတ်လုပ်ပေးပြန်ပါသည်။
များများတွေး၊ ဝေးဝေးတွေးခြင်းအားဖြင့် တဖြည်းဖြည်း အနာဂတ်အမြင် သန်စွမ်းလာပါသည်။ အကျိုးကျေးဇူး များကိုလည်း ရရှိလာနိုင်ပါသည်။ တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ ပတ်ချုံဟီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ ဆောင်ရွက်စဉ် အထည်အလိပ်ကို အခြေခံသော Samsung ကို အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီကြီးအဖြစ် အတင်းအကျပ် ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ သည်။ ထိုစဉ်က ခါးသီးသောအတွေ့အကြုံများကို ဖြတ်သန်းခဲ့သည့် Samsung မှာ တစ်ပိုင်း လျှပ်ကူးထုတ်လုပ်မှုတွင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာခဲ့ပြီး များစွာအကျိုးအမြတ်များရရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများ ၏ တွေးအားကောင်းမှု၊ အနာဂတ်အမြင်သန်စွမ်းမှုတို့ကြောင့်
လက်ကိုင်ဖုန်းများထုတ်လုပ်မှုတွင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး NOKIA ကို ကျော်ဖြတ်ကာ နံပါတ် (၁) နေရာသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပေသည်။ ကြီးမားသော အကျိုးကျေးဇူးများ၏ အခြေခံသည် “တွေးနိုင်သမျှတွေးခဲ့ခြင်း” မှအစပြုလာခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
တီထွင်မှုပါ အတွေးအားကောင်းသူများ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကောင်းသူများကြောင့် ကုမ္ပဏီများ အကျိုးအမြတ် ကြီးစွာ ရကြသည်ဖြစ်၍ ထိုထက် ပိုတွေးသူများက ဦးနှောက်ဖောက်စားမှုပြုလာကြသည်။ Head hunter ဟူသော ဦးနှောက် ဖောက်စားသူများက
ကုမ္ပဏီကို အကျိုးအမြတ် အကောင်းဆုံးရှာဖွေပေးနိုင်သည့် CEO များကို ရှာဖွေကြတော့သည်။ ကြိုက်ဈေးပေး၍ ကုမ္ပဏီများကူးပြောင်းစေပြီး လုပ်ငန်းတာဝန် ထမ်းဆောင်စေသည်။ ဤဖြစ်ရပ်က ရိုးစင်းသော်လည်း Head hunter များ၏အတွေးက ပို၍ခရီးရောက်သည့်သဘော ဖြစ်လာသည်။
၁၉၄ဝတစ်ဝိုက်ခန့်တွင် ကမ္ဘာကြီး၏ နေရာပေါင်းများစွာ၌ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံများ ယိမ်းထွက်သလို ထွက်လာကြ ၏။ အရင်းရှင်စနစ်ကို အခြေခံသော အမေရိကန်တို့အတွက် ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်လာသည်။ မည်သို့ တုန့်ပြန်ပါမည်နည်း၊ အမေရိကန်တို့၏အတွေးက ဦးစွာ ဘောင်ခတ်ဖို့လိုသည်ဟုဆိုကာ ကွန်မြူနစ်စနစ် ဆက်လက်မပြန့်ပွားအောင် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ Containment strategy ဖြစ်၏။ ဆိုဗီယက်ရုရှား၏ ကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဩဇာအာဏာကို လည်းကောင်း ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားလိုက်သည်။ ထို့နောက် စစ်အေးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲသည်။ CIA ကလည်း အရေးပါသော ကကြိုး ကကွက်များကို ကပြခဲ့၏။ နောက်ဆုံး ဆိုဗီယက်ရုရှားကြီး ဗုန်းဗုန်းပြိုကာ နိုင်ငံငယ်များအဖြစ် အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာ ကွဲပြား သွားကြတော့သည်။
ယနေ့ တရုတ်နိုင်ငံသည် စီးပွားရေးအရ တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်လာပြီး ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံးသော စီးပွားရေး ပါဝါနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးစနစ်မှာ အမေရိကန်တို့နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ကွန်မြူနစ်စနစ်ဖြစ်၏။ ယနေ့ အမေရိကန်သည် တရုတ်တို့အား တစ်ချိန်က ဆိုဗီယက်ရုရှားတို့ကဲ့သို့ ဝန်းရံပိတ်ဆို့မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ဘယ်အချိန် ဘာဖြစ်ကြမလဲဟူသည်ကို စောင့်ကြည့်ရပေဦးမည်။
အမေရိကန်သည် ကမ္ဘာကြီးကို တတ်နိုင်သမျှရှည်ကြာစွာ ဦးဆောင်လိုသည်၊ ဤအတွက် အတွေးအခြေခံ သော နည်းပညာဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်သလို၊ အခြားသော နည်းပေါင်းစုံဖြင့်လည်း ယှဉ်ပြိုင်ပေသည်။ သာမန်ယှဉ်ပြိုင်မှုထက် လွန်ကဲသော ယှဉ်ပြိုင်မှုမျိုးဖြင့်လည်း ယှဉ်ပြိုင်ပါ၏။ အမေရိကန်တို့၏ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက် မည်သည့်နည်းလမ်း ဖြင့်မဆို ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်ဟု ခံယူထားကြသူများ ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကပင် သာမန်မဟုတ်သော အတွေးတစ်မျိုး၊ သဘောတရားတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။
တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများသည် တွေးခြင်းမှအစပြုသည်။ တွေးပါများလာလျှင် အတွေးသစ်များရလာ၏။ အတွေး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပေါင်းဖက်တတ်လာ၏။ အတွေးသစ်များကြောင့် လူသားတို့ တိုးတက်လာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်၊ သစ်ရွက်သီ ကျောက်ခေတ်မှ ယနေ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းမျိုးစုံ ထွက်လာသည်၊ လူနေမှုပုံစံ များစွာပြောင်းလဲလာသည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းများ ပုံစံတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ထွက်လာသည်၊ ပို၍တီထွင်ဆန်းသစ်မှုရှိသောအရာများကို လူတို့မက်မောကြသည်၊ ထိုသည့်အပေါ် ငွေကြေးပို၍ သုံးစွဲကြ၏။ နိုင်ငံရေးစနစ်သစ် အတွေးအခေါ်တိုက်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်သည်၊ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတို့သည် အတွေးသစ်များကြောင့် ထွက်လာသောကုန်ပစ္စည်းသစ်များဖြင့် ဈေးကွက်တွင်ယှဉ်ပြိုင်ကြ၏။
မကြာသေးမီက (၁၉. ၁၁. ၁၂) က အမေရိကန်သမ္မတ
ဘားရက်အိုဘားမား မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ပြီး၊ ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်တွင် မိနစ် (၃ဝ) ကြာ မိန့်ခွန်းပြောသွားသည်၊ အမေရိကန်တို့ တိုးတက်ရခြင်းမှာ ပညာရေး ကြောင့်ဟုလည်း ဆိုသွားသည်၊ ပညာရေးကို
ကောင်းသထက်ကောင်းအောင်၊ ထက်သထက်ထက်အောင် တွေးခေါ်ကြရ ၏။ သင်ရိုးသစ်များ ရေးဆွဲကြ၏။ အတွေးအခေါ်သစ်၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အသစ်များကို ထည့်သွင်းသင်ကြားကြ၏။ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်ရမည် ဟူသောအတွေးကို အမေရိကန်တို့ လက်ခံကြ၏။ သို့နှင့် အမေရိကန်တို့သည် ကမ္ဘာကြီးကို နှစ်ပေါင်း (၇ဝ) ကျော်ကြာ ဦးဆောင်နိုင်နေခြင်း
အမေရိကန်တို့၏ ပညာရေးသင်ကြားမှုစနစ်သည် ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ကို တွေးခေါ်မှု အားကောင်းစေ သည်၊ သဘောတရားကို ပြည့်ဝစွာပေးသည်၊ တစ်အပေါင်းတစ်၏ ညီမျှခြင်းတစ်ဖက်တွင် "နှစ်" ရသည်ဟူသည့် အဖြေ ထက်၊ "ပေါင်း" ခြင်း၏သဘောတရား၊ "နှုတ်" ခြင်း၏သဘောတရား၊ "မြှောက်ခြင်း"
"စားခြင်း" ၏သဘောတရားကို ပို၍ ဦးစားပေးသင်ကြားသည်၊ အတွေးများများရစေရန် ကျောင်းသားများကို စာကြည့်တိုက် များများထိုင်စေသော သင်ကြား နည်းကို အခြေပြုသည်။
များမကြာမီတွင် အာဆီယံဒေသ လွတ်လပ်စွာ ကုန်စည်စီးဆင်းခွင့်ပြုတော့မည် ဖြစ်သည်၊ ကုန်ပစ္စည်းသာမက လူသားအရင်းအမြစ် စီးဆင်းခွင့်လည်းရှိလာမည် ဖြစ်သည်၊ တွေးနိုင်သူတို့၏ လုပ်ခလစာနှင့် မတွေးနိုင်သူတို့၏ လုပ်ခ လစာမှာ တူညီကြမည်မဟုတ်၊ ကိုယ်ကမတွေးနိုင်၍ သူ့နိုင်ငံအလုပ်သွားလုပ်လျှင် လစာနည်းနည်းသာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ တွေးနိုင်ခေါ်နိုင်သောသူတို့က ကိုယ့်ဆီလာလုပ်လျှင် လုပ်ခလစာများများ ပေးရလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
သဘောတရားတစ်ခုဟူသည်မှာ တွေးခေါ်ရာမှစသည်၊ သဘောတရားရလာသည်နှင့် နည်းလမ်းကို ရှာကြံကြ ၏၊ စီးပွားရေး၊နိုင်ငံရေးမှာလည်း ဤသဘောသာ ဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနေသော အင်တာနက်သည် ဤ သဘောတရားပေါ်မှာ အခြေခံသည်၊ လေလှိုင်းထဲမှ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် ဟူသောအတွေးမှ စခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်မှ နည်းပညာကိုရှာဖွေ၍ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ များမကြာမီ လူတို့သက်တောင့်သက်သာရှိရမည် ဟူသောအတွေးပေါ်၌ အခြေခံသော သဘောတရားကြောင့် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ရာ ယခုအခါ မျိုးစပ်ကားများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်၊ လအနည်းငယ်ခန့်တွင် ဝါယာကြိုးမလိုဘဲ အားသွင်းနိုင်သောစနစ်များ ပေါ်ထွက်လာဦးမည် ဖြစ်သည်။ မီးပလပ်ပေါက်ရှိသော နေရာတိုင်းတွင် အင်တာနက်ရလာဦးမည် ဖြစ်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းမှုအပေါ် အပြုံးမပျက်သော်လည်း ဦးနှောက်အလုပ်ပေးမှုအပေါ် စိုးရွံ့ကြသော မြန်မာတို့ အနေဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ထိပ်ရောက်နေကြသူများအားလုံးမှာ အတွေးအခေါ် ကောင်း၊ ပညာကောင်းကြသူများဖြစ်၍ ကိုယ်ကာယထက်၊ ဦးနှောက်အလုပ်ပေးမှုတွင် စူးရှကြသူများဖြစ်သည်ကို မေ့မထား စေလိုချေ။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲဖြစ်ပွားပြီး၊ ယနေ့ခံစားနေရသော အသီးအပွင့်တို့မှာလည်း နိုင်ငံတော်ကို ဦးဆောင်နေသော သမ္မတကြီး၏ သမားရိုးကျအတွေးမှ ဖောက်ထွက်ခဲ့သော တီထွင်မှုပါအတွေးကြောင့် ဖြစ်ပါ၏။ တီထွင်မှု ပါ တွေးခေါ်နိုင်ခြင်းသည် ဤသို့သော ထူးခြားသည့်ရလဒ်များကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ယခင်က ရိုးရာလက်ဖက်ကို ဖက်၊စက္ကူတို့ဖြင့် ထုတ်ပိုးရောင်းချသည်။ ယနေ့ ပုံစံဆန်းဆန်းဘူးများဖြင့် ထုတ်ပိုးမှုကောင်းပြုကာ ရောင်းချလာကြသည်၊ ပြည်ပတင်ပို့ကုန်အဖြစ်ပါ ရောင်းချလာကြရသည်။ ကမ္ဘာကျော် Star Buck ကော်ဖီသည် သမားရိုးကျ ကော်ဖီရောင်းချ ခြင်းမှခွဲထွက်၍ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုပါ ဆောင်ရွက်နိုင်သောကြောင့် ကမ္ဘာကျော်ရခြင်းဖြစ်သည်။
အစဉ်အလာခေတ်သည် ယဉ်ကျေးမှုမှတစ်ပါး ထိန်းသိမ်းရန်မဟုတ်တော့ပါ၊ အစဉ်အလာအတွေးအခေါ်များကို လည်း
စွန့်လွှတ်နိုင်ကြရန်ဖြစ်သည်။ သမိုင်းသစ်၊ စာမျက်နှာသစ်သို့ ရောက်လာသော မြန်မာနိုင်ငံသားများမှာ အတွေးသစ်၊ အမြင်သစ်တို့ကို ရယူနိုင်ကြရန်လိုပါသည်။